Dib U Eegid+Warbixin: Pierre-Emerick Aubameyang,Henrikh Mkhitaryan & Rikoodho Xasaasi Ah Oo Laga Diwaan Galiyay Kulankii Ay Arsenal Xasuuqday Everton – Kooxda.com
Home 2018 February Dib U Eegid, Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Dib U Eegid+Warbixin: Pierre-Emerick Aubameyang,Henrikh Mkhitaryan & Rikoodho Xasaasi Ah Oo Laga Diwaan Galiyay Kulankii Ay Arsenal Xasuuqday Everton
Dib U Eegid+Warbixin: Pierre-Emerick Aubameyang,Henrikh Mkhitaryan & Rikoodho Xasaasi Ah Oo Laga Diwaan Galiyay Kulankii Ay Arsenal Xasuuqday Everton
February 3, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Weeraryahanka cusub ee kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa durba isku qoray taariikhda horyaalka premier league kadib markii uu kulankiisii ugu horeeyay u ciyaaray kooxda Arsenal kulankii Everton.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ciyaaray kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka premier league kadib markii uu maalintii ugu dambaysay ku soo biiray suuqii January.
Gabon oo ah xulka uu ka soo jeedo Pierre-Emerick Aubameyang ayaa noqday xulkii 50-aad ee uu xiddig u matalo kulan premier league ah.
Xiddiga ugu qaalisan suuqa kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda Arsenal.
sidoo kale Pierre-Emerick Aubameyang ayaa noqday xiddigii 8-aad ee gool dhaliya kulankiisa ugu horeeya ee kooxda Arsenal.
Xiddiga khadka dhexe ee Henrikh Mkhitaryan ayaa wacdaro dhigay kulankii ay Arsenal guusha weyn ka gaartay kooxda Everton kulan ka tirsanaa horyaalka Premier league todobaadkiisii 26-aad.
Xiddiga reer Armenia ayaa ku bilowday kulankiisii ugu horeeyay ee premier league waxana uu durba man United u muujiyay in ay ku khaldanaayeen.
Henrikh Mkhitaryan ayaan wax gool ah dhalin laakiin waxa uu ahaa mishiinka ciyaarta kala wada isaga oo caawiye ka noqday 3 gool oo ka mid ah 5-ta gool ee Arsenal.
Kadib caawinta 3-daas gool Henrikh Mkhitaryan ayaa noqday xiddigii ugu horeeyay ee caawiye ka noqda 3 gool ama wax ka badan hal kulan oo premier league ah tan iyo sanadkii 2013 markaas oo uu Santi Cazorla caawiye ka noqday 4 gool hal kulan.
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey ayaa guul weyn ku hogaamiyay kooxdiisa Arsenal oo ay ka gaartay Everton kulan ka tirsanaa horyaalka premuer league todobaadkiisii 26-aad.
Xiddiga reer Wales ayaa dhaliyay 3 gool oo ka mid ah 5-ta gool ee ay Arsenal dhalisay kadib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu soo bandhigay.
Aaron Ramsey ayaa isku qoray taariikhda kooxda Arsenal ee horyaalka Premier league kadib 3-da gool ee uu ka dhaliyay kooxda Everton.
Ramsey ayaa noqday xiddigii 20-aad ee kooxda Arsenal u dhaliya saddexley kulan horyaalka premier league ah waana kooxda ugu badan ee sidaas samaya horyaalka premier league.
Kooxda Arsenal ayaa dhankeeda rikoor kala baxday kulankii ay xasuuqday kooxda Everton kana dhacay Emirates ee ka mid ahaa todobaadkii 26-aad ee horyaalka premier league.
Kooxda Arsenal ayaa qaybtii hore ee ciyaartaba dhalisay 4 gool kadib qaab ciyaareed dar-dar leh oo ay ku bilaabatay ciyaarta.
Kadib goolashii qaybtii horeee ay kooxda Arsenal rikoor kala baxday garoonka Iyada oo boodhka ka jaftay rikoor wakhti hore la dhigay.
Arsenal ayaa ah kooxda 2-aad ee hogaanka ku qabata 4 gool iyo wax ka badan qaybta hore ee ciyaarta kulan premier leageu kadib markii ay rikoorkaas dhigtay Man United sanadkii 1997.